Iikhosi ze-8 zasimahla zeSidanga se-Intanethi ezineZatifikethi zaBafundi beZizwe ngezizwe 2022
Izifundo zasimahla ze-Intanethi ze-8 ezineZatifikethi zaBafundi beZizwe ngezizwe
Kule nqaku, uya kufumana iinkcukacha ze-8 ezahlukeneyo izifundo ze-intanethi kunye nezatifikethi zabafundi bamazwe ngamazwe. Ezi nkqubo zasimahla zesidanga kwi-Intanethi zibandakanya i-bachelor, i-masters kunye neenkqubo zesidanga sobugqirha onokufikelela kuzo naphi na kwihlabathi liphela.
Ukufunda nge-Intanethi kukutshintsha kwemfundo, kangangexesha elide kubonakala ngathi lilo kuphela icandelo elingakaqhubekeli phambili, nangona ukuphuculwa kwetekhnoloji enkulu kufike, amanye amacandelo aqhubekile ngelixa indawo yemfundo ihleli injalo.
Nangona kunjalo, bekungekude nje kutshanje ukuba le nguqulelo kwezemfundo ivele kwaye ngoku nge-smartphone, ithebhulethi, ikhompyuter okanye ilaptop kunye nokuzimisela kwakho unokufumana izidanga zobungcali kunye nezatifikethi phantse kulo naliphi na icandelo lokufunda, ufumane izakhono ezikhethekileyo kunye nolwazi kwaye ufunde ezinye zeendlela ezilungileyo ezinokusombulula iingxaki zehlabathi lokwenyani, zonke ezikwi-Intanethi.
Malunga nezifundo zasimahla zeSidanga se-Intanethi esineZatifikethi zaBafundi beZizwe ngezizwe
Yintoni iSidanga seDyunivesithi?
Ngaba ungafumana isidanga sasimahla kwi-Intanethi?
Ngaba amaDigri akwi-Intanethi ayasebenza?
# 1 Master of Business Administration Inkqubo yeDigri
# 2 Nxulumana neSayensi kwiNkqubo yeComputer Science
# 3 Isidanga seNzululwazi kwiNkqubo yeDegree yeSayensi yezeMpilo
Inkqubo ye-4 ye-Master of Education kwi-Intanethi
# 5 I-Bachelor yeSayensi kuLawulo lwezoShishino
# 6 IsiDanga sokudibana kuLawulo lweShishini kwiNkqubo yeDigri ye-Intanethi
# 7 Isidanga seSayensi kwiNkqubo yeComputer Science Degree Program
# 8 Nxulumana neSayensi kwiNzululwazi yezeMpilo
Iiyunivesithi ezibonelela ngezifundo eziGcweleyo zaBafundi beZizwe ngeZizwe i2020
Imfundo ekwi-Intanethi yenye yezona zinto zinkulu zenzekileyo kwihlabathi kumaxesha akutshanje, enika ulwazi kubuchwephesha bemithombo yeendaba ukusuka kwindawo enye ukuya phantse kuzo zonke iimbombo zomhlaba anokuthi nabani na onezixhobo ezifanelekileyo akwazi ukufikelela kuzo ngokucofa nje okumbalwa.
Yintoni enye ekufundeni kwi-Intanethi? Uhlala kwindawo yakho oyithandayo yokuthuthuzela ukuze ufunde nantoni na oyifunayo, ukusuka ekufumaneni izidanga ezikumgangatho wehlabathi ukuya kufunda iindlela eziqhelekileyo kunye nokufumana izakhono ezilula kwiinkqubo zekhompyuter kunye nakwisayensi yedatha kwifilosofi, kwizifundo ezenziwa nge-intanethi, imfundo yezempilo kunye nokunye okuninzi.
Nokuba yeyiphi na obonakala uyilandela ekufundeni kwi-Intanethi iyakwenza kakuhle ekuqhubeleni phambili kwezemfundo nakwezobuchwephesha kwaye ibonelela ngamathuba anje ngokuqeshwa kwengqesho kunye neshishini lokuqalisa ngempumelelo ukuba nje ufunda izinto ezifanelekileyo
Ezi nkqubo zesidanga se-Intanethi kunye nezifundo zibonelelwa ziiyunivesithi ezahlukeneyo, iikholeji, imibutho kunye neenkampani amaqonga awahlukeneyo okufunda kwi-Intanethi ezinje nge-Coursera, edX, futureLearn, Khan Academy kunye nezinye ngelixa amanye amaziko eneqonga lawo elikhethekileyo lokufunda kwi-intanethi abalisebenzisayo xa behambisa iiklasi zabo ezikwi-Intanethi.
Umzekelo woku Stanford Online, ibonelela ngezifundo zasimahla ezihlawulelwayo nezihlawulelweyo kwi-intanethi kunye neenkqubo zesidanga kuwo onke amanqanaba okufunda kwaye ufumana isatifikethi njengesiqobo njengoko umfundi waseStanford efumana rhoqo, oku kuyasebenza nakwamanye amaziko nakwimibutho.
Isatifikethi sinyanisekile naso, ke musa ukuqala ucinge ukuba usifumene kwi-Intanethi ke ayisiyongqangi njengaleyo uyifumene kufundisiso oluthe rhoqo lwangaphandle. Ukufumana ubungqina nakweyiphi na inkqubo yesidanga kwenza ukuba ube nethuba lokufumana intsingiselo ngakumbi kwaye uya kwaziwa ngcono.
Ngelixa uninzi lwezifundo zesidanga se-intanethi zihlawulwa kakhulu, kukho ezinye ezisimahla kwaye usasifumana isatifikethi esinokuthi simahla okanye size nemali encinci ukuba usifumane, kwaye ngeli nqaku, uya kulazi inani elikhululekileyo iikhosi zesidanga se-Intanethi ezinezatifikethi zabafundi bamanye amazwe onokuzisebenzisa.
Ngaphambi kokuba ndiqale kumxholo ophambili weli nqaku, kukho ii-FAQs ezimbalwa endiya kuthanda ukuya kuzo ukuze ndicacelwe.
Isidanga saseyunivesithi sisiqinisekiso semfundo esinikwa abafundi, ngesiqhelo kwikholeji okanye eyunivesithi, xa siphumelele kwaye sanelisa isifundo esigqibeleleyo kwimfundo ephezulu.
Ewe unokufumana isidanga sasimahla kwi-Intanethi.
Nangona kwindawo yokufunda kwi-Intanethi, uninzi lweedigri ezikwi-Intanethi zihlawulwa kakhulu nangona amaxesha amaninzi engabizi mali ingako njengesikolo esiqhelekileyo esingaxhunyiwe kwi-intanethi, okwangoku, kukho iiyunivesithi zasimahla ezikwi-intanethi ezibonelela ngesidanga sasimahla kwi-Intanethi, isihlobo, iinkosi kunye izidanga zobugqirha.
Nangona ezi izidanga kusithiwa simahla, azikho simahla. Kukho ezinye iifizi ezibizwa ngokuba kuya kufuneka uzihlawule njengemirhumo yesicelo kunye nemirhumo yoviwo.
Ngapha koko, iifizi ezifunekayo zincinci kakhulu xa kuthelekiswa nento eya kuba yindleko yokufumana idigri efanayo ngaphandle kweintanethi.
Ukubaluleka kwesidanga sakho esikwi-Intanethi akufuneki kube yinto ekufuneka ubuze yona, ndiyathetha ukuba yeyiphi indlela engcono yokusebenzisa izibonelelo zetekhnoloji yanamhlanje? Ngaphandle kokuba usathanda ukuhambisa iileta ngeposi endaweni yokuthumela imiyalezo ngeWhatsapp okanye nge-imeyile ngemizuzwana.
Amaziko emveli akwamkela ngokukhawuleza ukufundwa kwe-Intanethi kunye nokufumana izidanga kuwo kwaye kuye kwaphumelela kwaye kwaqhubeka kuphucuka ngokuhamba kwexesha. Imibutho kwihlabathi liphela ayinakho ukukhetha ngaphandle kokuhlonipha iidigri ezifunyenwe ngofundo lwe-Intanethi.
Iiyunivesithi ezininzi ezaziwayo kwihlabathi liphela ziye zafuduka zanikezela ngezifundo ezikwi-Intanethi ukuza kuthi ga ngoku zibonelela ngenkqubo epheleleyo ye-intanethi.
Ke, idigri ekwi-Intanethi ibaluleke kakhulu. Kuthatha isibindi esikhulu kunye nokuzimisela ukulandela kunye nokugqibezela inkqubo ye-intanethi.
Ngoku, xa le mibuzo icacisiwe, sinokudlulela kumxholo ophambili wesifundo kwaye sifunde malunga nezifundo zasimahla zesidanga kwi-intanethi kunye nezatifikethi zabafundi bamanye amazwe ukuze ufake isicelo kwaye uqale isifundo sakho simahla.
Njengoko benditshilo ngaphambilana, zininzi iikhosi zesidanga esikwi-intanethi ezinezatifikethi ngaphandle kodwa zimbalwa kakhulu kuzo ezikhululekileyo, ndithetha ukuba asizifundisisi ngokupheleleyo!
Ngophando olunzulu, ndakwazi ukuza nezi zifundo zilandelayo zasimahla kwi-intanethi kunye nezatifikethi zabafundi bamanye amazwe.
INkqubo yoLawulo lwezoShishino kwiDigital Programme
Umdibaniso weSayensi kwiNkqubo yeComputer Science Degree
I-Bachelor yeSayensi kwiNkqubo yeDegree yeSayensi yezeMpilo
Inkqubo ye-Master of Education Online Degree
I-Bachelor yeSayensi kwiNkqubo yoLwazi lwe-Intanethi
Isidanga sokudibana kuLawulo lweShishini kwiNkqubo yesiDanga se-Intanethi
I-Bachelor yeSayensi kwiNkqubo yeComputer Science Degree Online
Umdibaniso weSayensi kwiNkqubo yeDegree yeSayensi yezeMpilo
le Inkqubo yesidanga se-MBA inikezelwa kwi-Intanethi yiYunivesithi yaBantu, iyunivesithi yasimahla ekwi-intanethi ebonelela ngeenkqubo zasimahla kumhlobo, isidanga kunye neenkqubo zesidanga sokuqala.
Inkqubo yonyaka omnye ye-MBA ibonelela ngenkqubo ebonakalayo kubunkokheli kushishino nakwindawo zoluntu njengenxalenye yenkqubo yokukhuthaza amava okufunda, ukuxhobisa abafundi ngezakhono, ulwazi kunye nesimo sengqondo esifunekayo ukulandela iinjongo zobuqu nezobungcali.
Ukufumana izakhono nolwazi ngabafundi kunceda ukugqwesa kwimibutho yanamhlanje eyahlukeneyo kwaye babe nakho ukuphumelela kushishino, kwimizi-mveliso, kurhulumente nakulawulo olungenzi nzuzo.
Ezi zifundo zineeveki ezilithoba ubude kwaye abafundi bangathatha iikhosi ezintathu kwikota nganye, inkqubo ye-MBA isidanga inokugqitywa kwisithuba seminyaka emithandathu okanye kwiinyanga ezilishumi elinesihlanu zokufunda ngokusisigxina okanye abafundi banokubhalisela ukufunda okwethutyana kwaye bathathe ikhosi nganye Ixesha.
Oku kulandelayo ziimfuno zokwamkelwa kwinkqubo ye-MBA ye-Intanethi kwiYunivesithi yaBantu;
Abafakizicelo kufuneka bagqibe kwaye bafumane inkqubo yesidanga sokuqala kwaye bangenise ubungqina ngexesha lesicelo
Kufuneka ube namava omsebenzi kwiminyaka emibini ubuncinci
Ileta enye yesalathiso evela kumhlohli okanye umqeshi odlulileyo
Isixa semali yesicelo eyi- $ 60 okanye iyalingana
Imibhalo ebhalwe kwizifundo zemfundo yamabanga aphantsi
Qalisa kwakhona ukubonisa ubuncinci iminyaka emibini yamava omsebenzi
Ukuba unomdla wokwandisa ulwazi lwakho kunye nokuqonda malunga nendlela amashishini asebenza ngayo kwaye aphumelele kunye nokwandisa uluhlu lwakho lwamathuba okuqhubela phambili umsebenzi Inkqubo ye-MBA lukhetho olufanelekileyo kuwe.
The Umhlobo wesayensi kwisayensi yekhompyuter yikhosi yasimahla ekwi-intanethi enikezelwa yiYunivesithi yaBantu kwaye yenzelwe ukuxhobisa abafundi ngezakhono ezisisiseko kunye nolwazi kwezi zilandelayo;
Ukubonelela abafundi ngolwazi lweemathematika kunye nemigaqo yesayensi esekwe kwikhompyuter kunye netekhnoloji yolwazi.
Abafundi baya kufumana izakhono kunye neendlela zokusebenzisa iindlela zokuyila kunye neenkqubo zekhompyuter
Funda iindlela kwaye uqaphele izixhobo zokuhlalutya iingxaki zobuchwephesha kwaye ube nakho ukuphucula amandla okucinga okuqinisekileyo kwiindlela zokuziphatha zekhompyuter.
Le nkqubo yazisa abafundi kumzi-mveliso we-IT, ibabeka kubuchule bekhompyuter kwaye ibaxhobise ukuze baqhubeke nokufunda ukuya kwisidanga se-bachelor kwisayensi.
Inkqubo yesidanga sokudibana ngokubanzi ithatha iminyaka emi-2 yokufunda ngokusisigxina ukuyigqiba, kuyafana apha.
Abafakizicelo kufuneka babe neminyaka eli-16 okanye ngaphezulu
Bekumele ukuba ugqibe isikolo esiphakamileyo
Unobuchule besiNgesi okanye unikezele ubungqina bokuba omnye uvela kwilizwe elingengawo isiNgesi.
Ukubhalwa kwezifundo kuyo yonke imfundo yamabanga aphakamileyo
Imali yesicelo eyi- $ 60 okanye iyalingana
Ngale nkqubo, abafundi kulindeleke ukuba bafumane izakhono ezikhethekileyo zekhompyuter kwaye banolwazi oluhle kakhulu lokufaka iikhowudi kwiilwimi abanokuthi bakwazi ukuzisebenzisa ukusombulula iingxaki zehlabathi lokwenyani.
Le yenye yeenkqubo zesidanga se-Intanethi esikwabonelelwa yiDyunivesithi yaBantu eqeqesha abafundi ngamakhondo emisebenzi akhathaleleyo kwezempilo, ukuququzelelwa kwabahlali kunye nemfundo ethatha indlela eyahlukeneyo yokufumana ulwazi kwiindawo ezahlukeneyo zokufunda kubandakanya impilo yoluntu, ukhathalelo lwempilo, i-bioethics kunye nempilo yengqondo .
Oku kwi-intanethi I-Bachelor yeSayensi kwiNkqubo yeSayensi yezeMpilo isebenzisa zombini iindlela zethiyori nezisebenzisekayo ukufundisa abafundi malunga nokuthintela izifo, ukuba zisebenza njani iinkqubo zokhathalelo lwempilo, impilo yoluntu kunye nesondlo. Idigri iya kukuvulela amathuba ahlukeneyo kwicandelo lezonyango nakwicandelo lokufundisa.
Ukufaka isicelo kule nkqubo kuya kukubonelela ngezakhono ezikhethekileyo kwimeko yezonyango kwaye isidanga sakho siya kwamkelwa ngokulinganayo njengequla.
Eli nqanaba lokuphumelela Inkqubo ye-Master of Education yeyona nto iphambili kuqeqesho lwabafundi kumakhondo emisebenzi anamandla kwimfundo, ukhathalelo lwabantwana kunye nobunkokeli ekuhlaleni, kwaye njengotitshala onobuchule onobuchule, uya kuba nakho ukukhuthaza ukubandakanya kunye nemeko zokufunda.
Isebenzisa inkqubo yezemfundo eyahlukeneyo, inkosi yenkqubo yemfundo isuka kuphuhliso lwabantu, ukufundisa kunye nokufunda ithiyori, indlela yokuziphatha, kunye nokuvavanywa kokufunda, ukulungiselela abafundi imisebenzi kumaziko emfundo abucala nawoluntu, iikholeji zoluntu kunye nolunye ulwakhiwo lwemfundo.
Abafundi abasisigxina bathabatha ikhosi enye kwikota nganye kwaye kuya kubathatha imigaqo engama-7 ukugqibezela isidanga ngasinye kwikota nganye kwiiveki ezilithoba. Abafundi bexeshana bathatha iikhosi ezimbini ngekota kwaye banokuyigqiba ngokwemigaqo ye-13 ngelixa abafundi abanokukhetha ukuthatha umkhondo okhawulezileyo banokuthatha iikhosi ezintathu ngekota kwaye bafumane isidanga sabo kwimigangatho emihlanu.
Ukwabelana ngolwazi kwabanye abantu kuyonwabisa kwaye kufuna izakhono ezizodwa ukwenza ngokufanelekileyo, uya kufumana ezi zakhono ezifanelekileyo kunye nolwazi ngokujoyina le nkqubo.
Le yenye yezifundo zasimahla ezikwi-intanethi kunye nezatifikethi zabafundi bamanye amazwe ezibonelelwa yiYunivesithi yaBantu ebonelela abafundi ngolwazi olubanzi lweethiyori zeshishini kunye neemodeli kunye nokusetyenziswa kwazo kwiingxaki zehlabathi lokwenyani.
le I-Bachelor yeSayensi kwiNkqubo yoLawulo lwezoShishino ijolise kuhlalutyo lweengxaki zeshishini kunye namathuba, imisebenzi ephambili yeshishini enjengobunkokeli kunye noshishino kunye nohlalutyo kunye nokuphunyezwa kwezigqibo zeshishini kunye nethiyori ezenza abafundi bafunde ukudibanisa iikhonsepthi zeshishini kuluntu olukhulu lwehlabathi ngokulungiselela indlela ecacileyo yomsebenzi ngaphakathi kweshishini intsimi.
Le khosi iya kwakha izakhono zakho zokwenza izigqibo onokuzisebenzisa kwiziphumo ezinxulumene neshishini, ukonyusa umthetho wakho wokusebenzisa indlela yokuqiqa kwiimeko zeshishini kwaye uya kuba nakho ukwenza ngokufanelekileyo ngaphakathi kweqela lendawo.
Ukufaka isicelo soku Inkqubo yesidanga kuLawulo lwezoShishino iqala uphononongo kwihlabathi loshishino, ukubonelela ngolwazi olubanzi lwezinto ezisisiseko zeshishini kunye nokufundisa abafundi ukuba benze njani iimodeli ezifanelekileyo zeshishini kwiimeko zokwenza izigqibo kunye nokusebenza ngokufanelekileyo namanye amaqela.
Apha, abafundi baya kuqala ukuphuhlisa amandla abo okucinga kunye nenkqubo ibonelela ngesiseko sokuqhubeka nokufunda ukuya kwisidanga se-bachelor.
Iikhompyuter ziyinxalenye ebaluleke kakhulu kuluntu lwanamhlanje kwaye imfuno yesakhono iya isanda, kungoko ayiloncedo nje kuphela kodwa inomvuzo ngokunjalo. Ukufaka isicelo soku I-Bachelor yeSayensi kwi-degree yeComputer Science degree izakukubonelela ngezakhono ezingalinganiyo, ubuchule kunye nolwazi malunga nemiba eyahlukeneyo yekhompyuter.
Ngesatifikethi sakho sezakhono kunye nesidanga sokubonisa, uyakwamkelwa kakhulu ziinkampani zobuchwephesha kwihlabathi liphela okanye ungagqwesa njenge-freelancer kwaye ubonelele ngeenkonzo zakho kuye nakubani na.
le Umdibaniso we-Intanethi weSayensi kwinkqubo yesidanga sezeMpilo iqala uhambo lwakho olusisiseko kwisayensi yezempilo kunye nobuchule obufunyenweyo, kunye nesidanga sakho sokudibana, unokukuqesha kwicandelo lezempilo ngelixa ulandela isidanga sakho se-bachelor.
Inkqubo yakhelwe kwisiseko sobugcisa sobunene esomeleleyo esibonelela ngokuqonda ngokubanzi kwezithiyori zoluntu kunye noluntu kunye neemodeli kunye nokusetyenziswa kwazo kwiimeko zehlabathi lokwenyani. Uya kufumana izakhono zokuthintela izifo kunye nokukhuthaza impilo kwizigulana kunye noluntu ngokufanayo.
Oku kuzisa isiphelo kwiinkcukacha zeekhosi zasimahla ezikwi-intanethi kunye nezatifikethi zabafundi bamanye amazwe ndidwelise iimfuno kunye neenkcukacha ukuze uqiniseke ukuba ukulungele oko ngaphambi kokufaka isicelo nakwezinye iinkqubo ezikwi-Intanethi.
Ukuqukumbela, ezi nkqubo zesidanga kunye nezatifikethi zabafundi abavela kwihlabathi liphela simahla kwaye zibonelelwa yiYunivesithi yaseMelika eyamkelweyo kwi-Intanethi.
Ezi zifundo zisingathwa ngabahlohli abaphambili kunye noonjingalwazi. Iinkqubo zihonjiswe ngononophelo oluninzi oluqinisekileyo oluvela kubantu abaliqela kwihlabathi liphela kwaye uninzi lwabafundi abaphumeleleyo bavumile ukuba zifanelekile njani izidanga kunye neenkqubo.
Ngolu hlaziyo, akuthandabuzeki ukuba into enye iya kukusebenzela, kuya kufuneka uzimisele kwaye ulandele inkqubo yakho oyikhethileyo kwaye emva kokugqitywa, uya kufumana isatifikethi sakho sedigri esiya kubonisa ukuba uyigqibile ngokusesikweni inkqubo yesidanga kwaye ufumene idigri yaseyunivesithi.
Izifundo zasimahla zeMasters kwi-Intanethi onokuthi ufake isicelo kuzo
Izifundo zasimahla ezikwi-IntanethiIikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi zeZidanga ezineZatifikethiIzifundo zasimahla zesidanga kwi-intanethi kunye nezatifikethi zabafundi bamanye amazwe
Post Previous:I-13 yeeScholarship eziphezulu kwi-UAE yeeExpats (ngaBafundi beZizwe ngezizwe)
Okulandelayo Post:Iikhosi zasimahla kwiYunivesithi ezikwi-Intanethi ezineZatifikethi zaBafundi
January 24, 2022 apha 1: 03 pm
kursy bezpłatne, ale jednak opłaty jakieś są… #facepalm
Pingback: I-20 yasimahla yeDigital Doctorate Degrees kwi-Intanethi
Djibril BARRY uthi:
Novemba 4, 2021 kwi-2: 58 pm
Ndinomdla kulwakhiwo olucetyiweyo oluthululela i-avoir une bonne capacité et expériences dans mon parcours
MONYE SUNDAY KESSY uthi:
Novemba 1, 2021 kwi-1: 29 pm
NDIYA KUTHANDA UKUTHATHA IKHOSI YOKHUSELEKO KWI-INTANETHI4
UDania Adeeb Hussain uthi:
Oktobha 13, 2020 kwi-8: 39 am
Ndinomdla wokujoyina iiklasi ze-Intanethi / ukufundela isidanga se-Master kulawulo lwezoShishino. Ndikulungele ukuhlawula i-US $ 60 / - Ngaba ungangqina ukuba le iya kuba kuphela kwentlawulo eyenziweyo kwikhosi epheleleyo okanye ungabiza enye into ngamakhefu aqhelekileyo okanye yintoni?
Nceda uqaphele ukuba ndiphumelele kwiYunivesithi yaseAden / Yemen.
Enkosi kwangaphambili ngempendulo yakho.
Disemba 5, 2020 kwi-1: 24 am
Enkosi ngenkxalabo. Nceda undwendwele http://www.Uopeople.edu kwaye usebenzise ngqo kwiwebhusayithi yeYunivesithi